China ngokwezifiso kwesikrini ukuphrinta ethafeni akukho brand amadoda ezithambile eziyisisekelo round entanyeni heather umbala tri-hlanganisa t shirt ifektri abakhiqizi | Umbono
ngokwezifiso kwesikrini sokuphrinta ithafa alikho sha elithambile lamadoda ayisisekelo nxazonke umbala we-heather color tri-blend t shirt
1.Kungani ihembe le-triblend lishisa kamnandi? Lapho iklayenti lami lifuna ukwelulekwa ngokukhetha impahla yokwenza ihembe elijwayelekile, ngiyaqiniseka ukuthi ngincoma lokho. Ukube ubungangibuza ukuthi kungani, bengizokutshela ukuthi i-triblend tee yinto ethambile kunazo zonke owake wayithinta.
Lezi zikibha ezingangokwezifiso eziyisixhumi ziyinhlanganisela ye-polyester, ukotini ne-rayon. Zombili zithambile futhi zilula kakhulu, zingena ziwugqinsi nje ngo-140gsm, ekubukekeni okuhle kwemfashini. Izindwangu ezihlanganisiwe zihlanganisa ukuqina nokugqoka okunethezeka okushelelekile. I-Polyester igcina ukuma nokuqina; Ukotini uboleka kokubili ukunethezeka nokuqina; URayon wenza ukuthungwa okuyingqayizivele; Imiphumela ephezulu yokuphrinta kwesikrini; Ukulingana okuncane kune-tee ejwayelekile yesitayela.
Olandelayo: ukuphrinta ngokwezifiso i-polyester engenalutho esebenzisa ilogo yehembe
Ihembe le-China Factory
Amadoda ama-T Graphics T Shirts
Izikibha Zokuphrinta Zabesilisa
Ihembe le-Oem labesilisa